Beesha Mareexaan iyo Kenya oo kala saxiixday heshiis xasaasi ah (Akhri) |
Beesha Mareexaan iyo Kenya oo kala saxiixday heshiis xasaasi ah (Akhri)
Cialis soft FRUIT online buy clomid online cheap, clomid without prescription. , generic Zoloft.
Waxaa magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya kusoo idlaaday kulamo u dhexeeyay Dowlada Kenya iyo Odayaal, Siyaasiyiin kasoo jeeda Beesha Marayxaan.
Kulamada oo ahaa mid lagu xoojinaayay xiriirka Ciidamada Dowlada Kenya ka jooga Xadka kala qeybsha Kenya iyo Somalia iyo Beesha Marayxaan.
Kulamada soo idlaaday ayaa waxaa hormuud u ahaa Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Kenya, Joseph Nkaissery, iyadoo kulamadaasi lagu kala saxiixday heshiis labada dhan maslaxad u ah.
Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Kenya, Joseph Nkaissery, ayaa soo jeediyay in Beesha Marayxaan looga baahan yahay inay tixgaliso Heshiiska lagu xoojinaayo wada shaqeynta Ciidamada Kenya ee xadka jooga iyo Beesha Marayxaan, isaga oo sheegay in hirgalinta Heshiiskaasi uu dardar galinaayo howlaha shaqo ee Ciidamada Kenya.
Joseph Nkaissery, waxa uu ku nuux-nuuxsaday inuu dareemaayo in Beesha Marayxaan ay u bisishahay in deegaanada ay degaan ay u helaan nabadgalyo, sidoo kalena ay Dowlada Kenya u aragto dhaqangalinta Heshiiska labada dhinac in dawo uu u noqon doono rajada dhaqdhaqaaqa Ciiddanka Kenya ee ka hawlgala Goballadda Gedo iyo Jubbooyinka.
Joseph Nkaissery, waxa uu sidoo kale amaanay in kulanka oo qaatay muddo Seddex Cisho ah ay goobjoog ka ahaayen ilaa Saddex Ra’isul wasaarayaal hore, Xildhibaano, Wasiiro, Aqoonyahanno iyo Ganacsato ka soo jeeda Beesha Marayxaan, isaga oo hubaal ka dhigay in Heshiiska lawada gaaray uu dhaqangalaayo shuruud la’aan.
Beesha Marayxaan, ayaa waxaa kulanka gabagabadiisa uga hadlay Cabdi Shirdoon Saacid oo mar Ra’isul-wasaare ka soo noqday Somalia oo sheegay in Iskaashiga Dowladda Kenya iyo Beesha Marayxaan uu fure u yahay sidii wax looga qaban lahaa Amni la’aanta, gaar ahaan Argagixisadda.
Shirdoon waxa uu xusay in Shirkaasi looga dan lahaa sidii labada dhinac uga shaqeyn lahaayeen Ammaanka, Nabadda iyo Horumarka labada dhinac ee Xuduudka.
Odayaasha iyo Siyaasiyiinta Beesha ayaa qalinka ku duugay dhowr qodob oo ay la imaaday Kenya.
Docda kale, Heshiiskaani ayaa hoos u dhigaaya awooda DFS, waxaana la doonaayay in DFS ay kulamadaasi ku dhex yeelato wakiilo.